OKUPHAMBILI I-Cozy 2bd ekhaya, i-hottub kunye nendawo yokuzivocavoca
Lo mgangatho uyi-1300 sqft yabucala ngokupheleleyo kunye ne-basement suite imalunga nje. 3km ukusuka edolophini kwindawo entle yaseWinnipeg. Le suite ixhotyiswe ngokupheleleyo ngezinto zodidi oluphezulu: Ibhedi yenkosi, ishawari enebhidet kunye nerack yetawuli eshushu, iwasha ekwi-suite kunye nesomisi, indawo yeofisi enikezelweyo, ikhitshi eligcweleyo elinezixhobo zeKitchenAid, indawo yomlilo yangaphakathi, indawo yokuzivocavoca exhotyiswe ngokupheleleyo, indawo yokutyela yangaphandle kunye Ipatio enendawo yomlilo yangaphandle, isikrini sangaphandle kunye neprojektha, kunye ne-6-7 yebhafu eshushu yabantu, phakathi kwezinye
***LE AYINGOMTHETHO WEKHAYA UNGABHALI UKUBA UCWANGCISA UKWENZA LONTO. Umgaqo-nkqubo wokunganyamezeli nto***
Kukho abaqeshi bexesha elide kwindawo ephezulu yale duplex. Ibhafu eshushu isebenza onke amaxesha onyaka kodwa ayivumelekanga ukuba isetyenziswe phakathi kweeyure ezinzulwini zobusuku kunye nentsimbi yesi-8am.
Ibandakanyiwe kwindawo yakho yokuhlala:
- Isicwangciso sohambo oluncomekayo kunye nencwadi yesikhokelo yokuhamba
- Umoya womoya kunye nobushushu obuphakathi
-WiFi yesantya esiphezulu esingenamkhawulo
-Ukuzonwabisa kubandakanya iprojektha, iTV ehlakaniphile eneNetflix
-Ikhitshi egcwele ngokupheleleyo kubandakanya izixhobo zombane ezikumgangatho ophezulu: iwasha izitya, imicrowave, isitovu segesi, ifriji kunye nesixhobo sokuhambisa amanzi, umenzi wekofu kunye neketile yeti.
- Iziqholo, ioyile, ikofu, iti, kunye neziqholo nazo ziyafumaneka
-Impahla ye-in-suite, isepha, i-steamer yempahla, ii-hangers
-Ishampoo, i-conditioner, isepha yesandla kunye neyomzimba, kunye nephepha langasese
-Izixhobo zokucoca kunye ne-antibacterial hand sanitizer
-Amagumbi amabini okulala: Ibhedi elingana nenkosi kumgangatho omkhulu kunye nebhedi ephindwe kabini kwigumbi elingaphantsi kunye nenketho ye-Queen air umatrasi kwindawo yokulala eyongezelelweyo.
-Ipropane yeBBQ grill okanye indawo yomlilo yangaphandle xa uceliwe
-Ibhedi ephathwayo, isitulo esiphezulu, amasango omntwana afumaneka xa uceliwe
* Indawo embindini, indawo, indawo!
- Imizuzu emi-5 ukusuka kwiradiyasi yedolophu (iNyaniso yoMntla wesikwere, iZiko loBomi laseKhanada- eyayisakuba yiZiko leMTS, iGalari yobuGcisa yaseWinnipeg, iDyunivesithi yaseWinnipeg, indawo yeMarike yeeForks, iSithili sokuTshintshela, njl.njl.)
Travel and adventure enthusiast living in Wpg, MB.
Ndifumaneka ngokulula ngetekisi okanye umnxeba
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Winnipeg